Ọ bụrụ na ị n'etiti ndị nzukọ nwe nke ihe iPhone onye nwere na-enweta adịkwa ha ntị, ọ Ezuru ma ọ bụ nanị inwe zụtara a ọhụrụ iPhone enweghị na-azọpụta ochie data na ntọala si ochie ngwaọrụ, ị na-ama maara ugbu a dị mkpa nke a ndabere.
Iṅomi gị faịlụ bụ ụzọ dị irè iji hụ niile nke gị data n'ụzọ ziri ezi zọpụta na na niile ọmụma dị mgbe niile. Ụzọ kasị mma ime otú ọ bụ n'ezie iji iTunes 12 ndabere ụfọdụ faịlụ na ntọala si na gị iPhone mere na mgbe ị chọrọ ma ọ bụ mkpa nwere otu ntọala na onye ọhụrụ ị ga-adịghị mkpa ida niile ozi ẹdude on gị ochie iOS ngwaọrụ.
Banyere iTunes 12
iTunes 12 bụ onye nke kasị mma ụzọ ndabere gị data na ntọala na-ahapụ niile nke gị ihe na-echegbu n'azụ. E nweghị ihe ọ mfe karịa na: ị dị nnọọ mkpa Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na-ka iTunes na-arụ ọrụ ya anwansi maka gị. Ma, ọ na-ekwe omume gaba otu ime eme otu usoro aka site n'oge ruo n'oge. Nwe nke iOS 3.0 nwekwara nhọrọ ka ha backups ezoro ezo ka e meere ha nile ụbọchị.
Gịnị ka iTunes azụ elu?
Na iTunes 12 ị nwere ekwe omume nke na-eme a zuru azụ elu nke ntọala na ụbọchị dị na gị iOS ngwaọrụ. Chee echiche ihe atụ nke niile nke gị photos, ederede ozi, ndetu, olu memos, kọntaktị na ndị ọzọ na ị na-agaghị achọ ka ida mgbe agafe si gị ochie iPhone ọhụrụ version.
Part 1. Olee ndabere ozi na iTunes 12 N'ihi na Windows ọrụ
Wondershare TunesGo bụ ihe magburu onwe omume na-ekwe ka ị ịkwaga niile nke gị faịlụ, songs, foto na onye data gị iPhone gị PC. Nzọụkwụ mbụ bụ mgbe ahụ ibudata gị ikpe mbipute nke usoro ihe omume si website kọmputa gị. Ozugbo ị wụnye ya, ẹkedori ya na jikọọ na gị iPhone na kọmputa site na gị eriri USB. Gị iPhone ga-akpaghị aka achọpụtara!
Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, ka anyị hụ otú iji TunesGo na iTunes.
Nke mbụ niile ị doro anya na mkpa na TunesGo na PC gị na na jikọọ na ngwaọrụ gị kọmputa gị site na eriri USB. Wee mepee omume window.
Ugbu a, pịa 'Iji iTunes' ke akpan window. A na ime ga-ekwe ka ị mbupụ gị music, listi ọkpụkpọ, videos, pọdkastị, audiobooks, artworks, wdg site na ngwaọrụ gị iTunes.
Iji mbupụ gị media, ị kwesịrị ị wee pịa na Media management window. Ugbu a gị na mkpa iji họrọ faịlụ ịchọrọ ị bupu wee pịa na mbupụ menu na menu mmanya.
Iji bupu Ndi ana-akpo pịa kọntaktsị na hapụrụ kọlụm. Họrọ gị chọrọ na kọntaktị na pịa bọtịnụ mbubata / mbupụ. Mgbe ahụ, họrọ a kwekọrọ ekwekọ edinam si ndepụta
Mbupụ gị foto, pịa foto na ekpe kọlụm na-emeghe ihe album. Gaba ugbu a iji họrọ niile photos na ị chọrọ mbupụ na ị PC wee pịa na triangle n'okpuru 'Export ya na' nyefee photos gị na kọmputa.
Ya mere na ọ bụ ya! Dị nnọọ mfe, ọ bụghị ya?
Otú ndabere ozi na iCloud maka Windows ọrụ
iCloud awade ọzọ ụzọ dị mfe iji chekwaa faịlụ. Nke mbụ niile, n'elu ịdenye maka ọrụ ị na-akpaghị aka na-5GB nke free nchekwa, ga-eji iCloud ndabere, iCloud Drive, iCloud Photo Library, ngwa data na akwụkwọ echekwara na iCloud, gụnyere iCloud Mail. Ọ bụ n'ezie-ekwe omume nweta nkwalite gị ohere nchekwa site ịzụ ihe nchekwa.
Nkwado ndabere na mpaghara na-mere-akpaghị aka mgbe agbanyere ngwaọrụ (ma ekpochi ma ọ bụ jikọọ a ike isi iyi).
Ya mere, ihe i nwere ike isi ndabere na iCloud?
Ịzụta akụkọ ihe mere eme music, fim, TV na-egosi, ngwa, na akwụkwọ.
Foto na vidiyo na gị iOS ngwaọrụ.
Home ihuenyo na ngwa nzukọ
iMessage, SMS na MMS ozi
Ebe a bụ otú ị ga-gaba:
Nke mbụ niile, download iCloud maka Windows. Mgbe ọ mere, na-emeghe ya ma banye na nzere gị nke akaụntụ gị kere.
Họrọ ọdịnaya na ị chọrọ ịnọgide na-emelite gafee gị na ngwaọrụ.
Mgbe ahụ, pịa itinye!
iCloud maka Windows emepụta a Photos nchekwa akpọ iCloud Photos: ọhụrụ ọ bụla photos na ị na-na gị iOS ngwaọrụ a na-ahụ na-akpaghị aka echekwara na raara onwe ya nye nchekwa.
Cheta na gị Gburu, kọntaktị, kalenda, na ihe ncheta nwekwara ike ịchekwa ma na-ruo ụbọchị na ngwaọrụ gị! N'ihi nke a, i kwesịrị ime n'aka na ị melite iCloud Mail na niile nke gị ngwaọrụ: na gị PC, emeghe iCloud maka Windows, họrọ Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, na aga-eme, wee pịa Mee.
Part 2. Olee ndabere ozi na m awụ ọsọ n'ugwu 12 N'ihi na Mac ọrụ
Ọ bụrụ na ị a Mac ọrụ ị ga-enweta ohere iji Wondershare TunesGo Ochie dị ka gị họọrọ ndabere usoro. Ebe a bụ otú ị na-eme ya:
Nke mbụ niile, jikọọ ị iOS ngwaọrụ gị Mac na ẹkedori TunesGo
Mgbe ahụ, pịa 'Iji iTunes' na ala nke window:
N'oge a, ị ga-enweta a mmapụta window na-agwa gị na ụfọdụ songs na listi ọkpụkpọ na-abịaghị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa mmalite ka na-amalite na-ebufe usoro.
N'otu aka ahụ, nyefee gị photos si gị iPhone gị Mac, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ Photos site n'aka ekpe menu. Mgbe ahụ, pịa igwefoto mpịakọta na nri ikpughe photos zoro a ngalaba. Ugbu a họrọ foto na ị chọrọ ka mbupụ na pịa on 'Export'. Otu ọrụ dị maka videos.
Otú ndabere ozi na iCloud maka Mac ọrụ
Nke mbụ niile, ike gị iCloud akaụntụ, ha na-aga usoro mmasị na họrọ akara ngosi.
Ịhọrọ nke atụmatụ ndị ị na-achọ ka enyere maka nchekwa nke gị ọdịnaya.
Rịba ama Otú ọ dị na ohere nchekwa na iCloud dị nta. Iji nweta nkwalite, kpatụ na ịgbanwe Nchekwa Plan nhọrọ nweta nkwalite ka a ibu nchekwa unit:
Atụmatụ maka Nyefee Music si Flash Drive ka iTunes
A Quick Way Ka idetuo Playlist si iPod ka iTunes
> Resource> iTunes> otú ndabere iPhone na iTunes 12